दलाई लामा अर्थात 'द लाइ लामा' | Citizen Post News
२०१२ को जुलार्इमा वेलायतमा भएको कार्यक्रममा दलाई लामाले “बुद्धमार्गको सुरुवात भारतबाट भएको हो । कोहीकोही बुद्धलाई नेपाली भन्छन्, केहीले भारतीय तर यसबाट केही फरक पर्दैन” भने पश्यात धेरै नेपालीले आक्रोश पोखेका थिए । कारण थियो-उनको भनाइको दोश्रो पाटो । बुद्धका जन्म स्थानबारे उनले उच्चारणै नगरेको भए पनि उनको प्रवचनको उचार्इ घट्ने थिएन । बुद्ध जन्मेका नेपालीभूमी लुम्बिनीमै हो भन्ने सत्य बोल्दा उनको बिग्रिहाल्ने केही थिएन् । हालै उनले वुद्धलाई नेपाली भन्नुमा अर्थ नराख्ने भन्दै भारती भन्नमा नै जोड दिए । पहिला बिवादित भइसकेपछि उनले यो पटक वुद्धलाई विश्व नागरिकका रुपमा परिचय दिएका भए कुनै समस्या नै आउने थिएन । तर उनको जोड उनीसंगै बस्ने व्यक्तिलाई सोधी सोधी भारतीय भन्नमा नै रह्यो । वुद्ध जन्मनु भएको समयमा न त नेपाल थियो, न त भारत नै भन्ने कुरामा हामी अनभिज्ञ छैनौं । न त कपिलवस्तु ठुलो थियो र कपिलवस्तुको केही भाग भारतमा पर्न सक्ने कुरामा नै अनभिज्ञ छौं ।
उनले भने झैं न त वुद्ध शिक्षा महत्वपूर्ण हुने कुरामा हाम्रो असहमति छ, न उनले नाम लिएका देशहरुमा बुद्धिज्म फैलिएको कुरामा । बिभिन्न देशको पाठ्यपुस्तकमा वुद्धको जन्म भारतको उत्तरी भागमा भनेर लेखिने अनि वुद्धको वास्तबिक जन्म भने बर्तमान आधुनिक नेपालको लुम्बिनीमा पर्ने भनेपछि यसले के सन्देश दिन्छ ? यो यथार्थता, भारतको नियत र तलका यथार्थतालाई एक्कै ठाउँमा राखेर हेर्नुस् र सोच्नुस् । निचोड भयाबह नहोला । बुद्धलाई भारतीय राजकुमार भन्दै हिँडने वा पुस्तकै छपाउने रामदेवले काठमाडौँमा आएका बेला बुद्धको जन्मस्थल नेपालीभूमी लुम्बिनी भएको कुरा २३ सय वर्ष पुरानो अशोकस्तम्भले प्रमाणित गरेको छ, त्यसैले बुद्ध कहाँ जन्मे भन्ने कुरा विवादको कुरै होइन भने । प्रधानमन्त्रीकै पद ओगटिरहँदा नै मोदीले भारतमा बोलेको भन्दा बिल्कुलै फरक ढंगले नेपाल आएर नेपाललाई वुद्धभूमि भने ।
तर जापान गएर अलिकति कुरा फेरेका मोदीले जर्मन र फ्रान्स गएर ठिक उल्टो बोले । बेला बेलामा भरतीय पत्रकार, कलाकार, सुन्दरी र लेखकहरु कसरी नेपालका बारे नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने काम कुरो खुलेयाम गर्छन् र दबाबपछि माफी माग्छन् । ताराम्तार जंगे पिलर किन हराउँछन् ? सिमानामा निरन्तर अतिक्रमण किन हुने गर्छ ? लुम्बिनीमा उत्खनन गर्दा प्राप्त भएका केही ट्रक पुरातात्विक महत्वका सामग्री जांच्न भनि लगिएकोमा भारतले अहिलेसम्म किन फर्काएन ? अर्बौं खर्चेर नक्कली कपिलवस्तु नीजि क्षेत्रलाई अगाडि सारेर बनाइनुको तात्पर्य के हो ? अहिले पनि नेपाली जनता यि प्रश्नहरुको उत्तर खोजीरहेका छन् । सबै किसिमका जाती, धर्म र समुदायमा सर्वस्वीकार्य महामानव गौतम बुद्ध सम्पूर्ण विश्व नागरिकको साझा सम्पत्ति भएको कुरा निर्बिबाद हो ।
अर्को बिवादरहित तथ्य के पनि हो भने बुद्ध जन्मदाको समयमा नेपाल तथा भारत भन्ने देशहरु नभए तापनि बुद्ध जन्मेको स्थान भने अहिलेको नेपालको लुम्बिनीमा पर्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । र, युनेस्कोले लुम्बिनिलाई बिश्व सम्पदा सूचिमा समावेश पनि गरेको छ । बुद्ध बिश्वकै साझा सम्पत्ति भएको कारण आस्थाका आधारमा कसैले मेरो अथवा हाम्रो भन्छन् भने त्यसमा कसैले प्रश्न उठाइराख्नु पर्ने देखिन्न । तर उनको महानता र प्रसिद्धीका कारण क्षेत्रका आधारमा नाजायज र गलत ढंगले शक्तिका भरमा आफ्नो भनि प्रमाणित गर्ने दुश्प्रयास भइरहेको छ । नाजायज फाईदा लिन बिश्व जनमतलाई दिग्भ्रमित तुल्याउन गरिने यस्ता खालका कार्यमा मौन बस्दा अरु थप नाजायज दुस्प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्दछ । तसर्थ, यि कुराहरुलाई अलग्याएर हेर्न सकिन्न् । र, के पनि कुरालाई अलग्याएर हेर्न सकिन्न भने दलाई लामा लामो समयसम्म भारतमा आश्रित छ । तिब्बतप्रतिको नेपालको धारणाबारे दलाई लामा अनभिज्ञ छैनन् । दोस्रो पटक पनि उनले विश्व समूदायलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेपछि सामाजिक सञ्जालभर विरोध भइरहेको छ । उनले केही प्रस्टीकरण पनि दिइसकेका छन् । उनलाई अहिले गुगल गरिएको खण्डमा झुटा अर्थात द लाइ लामा का रुपमा भेटिन्छ । लेखक: लुम्बिनी कपिलवस्तु दिवस अभियानका बिश्व संयोजक हुन् ।